Chapelle Calvary Modesto dia manetsika ny efitrano fitetezana, fampivoarana amin'ny fampielezana ny Pix BPswitch Integrated Production Switcher - NAB Show News amin'ny Broadcast Beat. Mpanolotra ofisialin'ny NAB Show, mpamokatra ny NAB Show LIVE
Home » News » Chapelle Calvary Modesto manetsika ny efitrano fisafoana, ny fampivoarana ny fampielezana ny Pix BPswitch Integrated Production Switcher
Chapelle Calvary Modesto manetsika ny efitrano fisafoana, ny fampivoarana ny fampielezana ny Pix BPswitch Integrated Production Switcher
Chelmsford, Mass. - Nov. 8, 2018 - Rehefa napetraka tao amin'ny Chapel Calvary Modesto ny efitrano fitantanana tamin'ny volana Septambra, dia nahavita ny fametrahana ny famolavolana famokarana mivantana Broadcast Pix ™ BPswitch ™ MX. Ny fiangonana dia mamokatra ny MAG (famafazana sary) amin'ny fandrakofana ny serivisiny ho an'ny fiangonana ary koa ny fandrakofam-pahaizana maro momba ny horonan-tsary mivantana.
Miorina ao Modesto, Calif., Calvary Chapel dia fiangonana tsy misy fiangonana izay manana mpikambana 3,500 mahery. Miorina amin'ny toeram-ponenana 17-acre amin'ny tranobe 50,000 metatra toradroa, ny fiangonana dia manolotra torolàlana dimy alina isan-kerinandro. Ny alahady sy ny alarobia dia mivelatra mivantana ary ny alahady dia maka sary ny 1,800 mpijery manerantany.
Nandritra ny taona maro, ny ekipa mpilatsaka an-tsitrapo dia niasa an-trano ambony tao amin'ny fiangonana tao amin'ny efitrano iray hafa niaraka tamin'ny varavarankely tokana izay nanome endrika ny fitoerana masina. Dave Abbey, talen'ny fampahalalam-baovao, nilaza fa niasa tsara nandritra ny fotoana fohy ny fananganana, saingy nifindra trano ambany ny mpaka sary sy audio. Rehefa nanosika ny ekipa mpamokatra vokatra tany am-piandohan'ity taona ity ny fiangonana dia nanapa-kevitra ny hanatsara ny famolavolana ny famokarana angona avy amin'ny Granite ™ sy ny fitaovana famokarana hafa. Ny Kalvary Chapel dia nifanaraka tamin'i Brad C. Shields sy Associates tao Modesto noho ny fandrindrana ankapobeny.
Tahaka ny Granite, ny paikady vaovao dia mila mifehy ny telo Sony PTZ fakantsary napetraka eo amin'ny rindrin'ny tempoly, ary koa mamokatra programa roa miaraka. Na dia ny famokarana I MAG aza dia kely kokoa ny fakantsary afovoany mifangaro amin'ny tononkalo avy amin'ny ProPresenter, ny famokarana mivelatra dia mampiasa ny kamera telo rehetra miaraka amin'ny fanodinana CG sy ny votoaty hafa.
Ny output Power Outbid BPswitch dia nanome ny fonctionn'ny Abbey nilaina, ary ny fiangonana dia afaka nanangom-bola tamin'ny alalan'ny fanavaozana ny rafitra fanaraha-mason'ny Granite. "Tena zava-dehibe tamiko ny fananantsika ny 2 M / E tsy misy ny vidin'ny X4XX M / E," hoy izy nanampy. "Mahafinaritra tokoa izany, tena tianay izany."
Ny efitrano fanaraha-maso vaovao dia toy ny trano fonenana manodidina ny rindrina fohy. "Amin'ny famokarana mivantana, te-hitoetra amin'ny ankapobeny ianao, fa ho antsika izay tsy ilaina," hoy ny fanazavan'ny Abbey. "Ankehitriny dia manana teknôlôjia telo avokoa izahay ao amin'ny efitrano iray ihany, noho izany ny fifandraisana dia tsara kokoa. Izany dia fahasamihafana amin'ny alina sy andro. "
Ankoatra ny tolotra tsy tapaka, ny BPswitch koa dia nanatsara ny fizotran'ny asa fanaovan-tsorona, izay loharanon-katezerana ho an'ny ekipa famokarana video. Saika ny fanompoam-pahatsiarovana rehetra dia ahitana lahatsary iray, ary ny Abbey dia mandray votoaty amin'ny endrika isan-karazany. Miaraka amin'ilay BPswitch vaovao, ny Chapel Calvary dia mampiasa ny rafitra fitantanana ny onjam-peo BPNet ™ mifototra amin'ny rahona. Ny Abbey dia mandefa rohy ahafahan'ny mpikarakara mampakatra ny lahatsariny. Avy eo, dia niova tanteraka ny lahatsary ary azo alaina amin'ny playback amin'ny BPswitch.
Ny fanamafisana ny efitrano fanaraha-maso hafa dia nahitana fanatsarana roa monitored 27-inch, ary koa ny feo vaovao Soundcraft Digital sy Dante digital teny tambajotra. Ny Chapel Calvary koa dia nanampy mpitaingina mijery fanaraha-maso ao amin'ny efitrano fanaraha-maso, ary ampiasao ny mpampiasa mpampiasa Broadcast Pix Commander ™ hanova ny fampisehoana I MAG ho an'ny fitoerana masina.
Miaraka amin'ny safidiny miaraka amin'ny 3D graphics graphics CG, Broadcast Pix dia manome ny lalam-pamokarana feno tanteraka amin'ny horonan-tsary mivantana miaraka amin'ny teknolojian'ny fanamafisam-peo sy ny automation. Avy amin'ny vahaolana malefaka ho an'ny vahaolana avo lenta, ny Broadcast Pix rehetra dia manana fitaovana maro be izay mahatonga azy io ho mora ny manatsara sy mampifanaraka ny orinasanao eo an-toerana sy amin'ny IP. Plus, ny ecosystem BPNet dia manome ny raharaham-barotra amin'ny rahona sy ny fitantanana ny harena. Ny orinasa 2002 dia manana mpanjifa any amin'ny firenena 100 mihoatra ny XNUMX ary izy no mpitarika amin'ny fametrahana tanteraka ny famokarana ho an'ny governemanta, ny fampielezam-peo, ny fampitana mivantana, ny hetsika mivantana, ary ny fampihetseham-peo an-tsary. Mianara bebe kokoa amin'ny www.broadcastpix.com.
Ny Broadcast Pix, Broadcast Pix Commander, BPNet, BPswitch ary Granite dia marika famantarana an'ny Broadcast Pix, Inc. Patented. Ny mpanamboatra dia natao any Etazonia.
South Carolina Cable Channel CN2 Shoots Live Field Reports with JVC ProHD Portable Bridge - Novambra 15, 2018
Nandritra ny fampielezan-kevitry ny WFX i Amerika dia nitazona vahoaka be - Novambra 12, 2018
Chapelle Calvary Modesto manetsika ny efitrano fisafoana, ny fampivoarana ny fampielezana ny Pix BPswitch Integrated Production Switcher - Novambra 8, 2018
fampitana injeniera fampitana Engineering fampitana Pix fampidirana famokarana switcher Spears & Arrows Streaming Video injeniera fanompoam-pivavahana	2018-11-08
Previous: Technicolor PostWorks 'Ben Murray hitarika sehatra iray amin'ny famoahana ao DOC NYC
Next: Rising Sun Pictures Fanabeazana: Joannah Anderson Fanadihadiana
Archives Select Month Novambra 2018 (292) Oktobra 2018 (496) Septambra 2018 (495) Aogositra 2018 (398) Jolay 2018 (876) Jona 2018 (869) May 2018 (871) Aprily 2018 (831) March 2018 (780) Febroary 2018 (685) Janoary 2018 (605) Desambra 2017 (396) Novambra 2017 (712) Oktobra 2017 (835) Septambra 2017 (608) Aogositra 2017 (583) Jolay 2017 (710) Jona 2017 (543) May 2017 (621) Aprily 2017 (695) March 2017 (704) Febroary 2017 (340) Janoary 2017 (364) Desambra 2016 (608) Novambra 2016 (344) Oktobra 2016 (556) Septambra 2016 (622) Aogositra 2016 (1056) Jolay 2016 (532) Jona 2016 (414) May 2016 (505) Aprily 2016 (713) March 2016 (743) Febroary 2016 (382) Janoary 2016 (122) Desambra 2015 (358) Novambra 2015 (327) Oktobra 2015 (152) Septambra 2015 (259) Aogositra 2015 (440) Jolay 2015 (276) Jona 2015 (140) May 2015 (128) Aprily 2015 (435) March 2015 (289) Febroary 2015 (298) Janoary 2015 (131) Desambra 2014 (103) Novambra 2014 (194) Oktobra 2014 (149) Septambra 2014 (381) Aogositra 2014 (250) Jolay 2014 (287) Jona 2014 (363) May 2014 (231) Aprily 2014 (744) March 2014 (560) Febroary 2014 (427) Janoary 2014 (289) Desambra 2013 (137) Novambra 2013 (545) Oktobra 2013 (290) Jolay 2013 (26) May 2013 (13) Aprily 2013 (1) March 2013 (2) 0 (306)
Hey Buddy !, nahita ity fampahalalana ity ho anao aho: "The Chapel Calvary Modesto dia mampivondrona ny efitrano fisafoana, fanavaozana amin'ny fampielezana ny Pix BPswitch Integrated Production Switcher". Ity ny tranonkala: https://www.broadcastbeat.com/calvary-chapel-modesto-moves-control-room-upgrades-to-broadcast-pix-bpswitch-integrated-production-switcher/. Misaotra anao.